musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Mhenderekedzo shanu dzisingapotse paunenge uri pazororo muSychelles
Inozivikanwa nerunako rwechisikirwo uye inoshamisa maruva nemhuka, mahombekombe ayo anochera Seychelles turquoise bhuruu uye inodziya mvura idhirowa kwavari. Kubva pakavhurika hupfu-zvinyoro-nyoro kusvika kune yakatambanudzwa tambo dzemichindwe uye vouloutier-dzakapetwa, chitsuwa chese chakabata "anse" yayo yakavanzika.
Seychelles chitsuwa chiri muIndian Ocean chine anopfuura zana zana ezvitsuwa kune zita rayo.
Kune anopfuura zana nemakumi maviri emahombekombe anoshamisa ekunakidzwa paunenge uchishanyira ino nyika yeparadhiso yakazadzwa nekunakirwa kwemakungwa.
Heano mahombekombe mashanu epamusoro anofanirwa kuve pane ese evashanyi anofanirwa-kushanya runyorwa kana muSychelles.
Iine anopfuura makumi maviri emabhichi ekusarudza kubva pazvitsuwa zvitatu zvikuru zveSeychelles, heano mahombekombe mashanu ayo anofanirwa kuve ari pane ese emisheni yekumira.
Nzvimbo yakanaka yekuhwanda, paLa Digue, Anse Cocos iri kumahombekombe ekumabvazuva kwechitsuwa chidiki che Secheres uye inongowanikwa chete nekukwira kwemaminetsi makumi matatu, kungave nekutora nzira kubva kuGreat Anse kana kune imwe nzira kubva kuAnse Fourmis. Zvishoma zvinozivikanwa kupfuura iyo yakawanda-yakatorwa mifananidzo Anse Source D'Argent, iyo yainogovana yakafanana maficha, inoyevedza Anse Cocos ndiyo inonyanya kukosheswa kune yayo yakavharirwa maficha, ayo anoita ayo ese mashiripiti.
Anse Lazio, inozivikanwa segungwa rine mukurumbira muPraslin, inowanzo kuverengerwa pakati pemahombekombe gumi epamusoro pasirese. Age-old granite sentinels vanomira vakarinda kumagumo ese epikicha-yakatambanuka yakatwasuka yejecha jena rakapfava rinotungamira kumvura yakajeka, yakakwana kushambira uye snorkeling. Izvo zvinofanirwa pane runyorwa rwevashanyi vese, Anse Lazio anoramba achinyaradza zvinoenderana uye haazomboodza moyo.
Mumwe mudiwa paPraslin, akanakisa Anse Georgette akakodzera kukwira kwemaminitsi makumi matatu kuburikidza nenzvimbo dzakanakisa dzeConstance Lemuria Resort. Neimwe nzira, inowanikwa neigwa. Kana iwe ukasvitsa iyo Anse Georgette, iwe zvechokwadi uchakundwa nehupfu hwakapfava jecha rakakomberedzwa nemiti yakasvibira yemiti, pamwe neinoshamisa snorkeling nzvimbo.
Ichizivikanwa kunge igungwa rinotorwa mifananidzo kwazvo pasirese, uye inokwanisika nekutasva bhasikoro kuburikidza neLa Digue's L'Union Estate, ichi chiratidzo chakasarudzika chinokosheswa nekuda kwemahombekombe ayo makuru egranite asiwo jecha rayo rakapfava jena uye mvura yakajeka ye-turquoise. Yakachengetedzwa nedombo, gungwa rakadzikama nekusingaperi paAnse Source D'Argent, ichiita kuti ive inodiwa kumhuri uye vakaroorana vanongoda kuzununguswa nemafungu kana kuyedza ruoko rwavo pakuita snorkeling. Iyo inofanirwa, kana iwe uri paLa Digue!
Kazhinji inotsanangurwa se "inonakidza" kana "yakatanhamara," Anse Takamaka ndeimwe yemahombekombe anoshamisa eMahé. Inowanikwa kumaodzanyemba kweMahé, Anse Takamaka inoratidzira iyo kadhi-yakanaka gungwa, uko mvura yemusango yeIndian Ocean inouya kumahombekombe.